လူနေမှုပုံစံ - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်သတင်း
မေလ 27, 2021 မေလ 26, 2021 Sheryl Wright	မှတ်ချက် Leave
သင်၏အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေကိုသင်စိုးရိမ်ပါသလား။ ဒီနေရာဟာသင်အရမ်းဂရုစိုက်ဖို့မတတ်နိုင်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိခေတ်မီလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုအားလုံး၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးသည်ကွာရှင်းခြင်းဖြင့်အဆုံးသတ်လိမ့်မည်။ ဒီကံကြမ္မာကိုရှောင်ရှားရန်သင်အသုံးပြုနိုင်သည့်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ ဤတွင်အကြံပေးခြင်းသည်သင်၏အိမ်ထောင်ရေးကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည့်နည်းလမ်းအချို့ဖြစ်သည်။
မေလ 27, 2021 မေလ 26, 2021 ဗစ်တိုးရီးယားစမစ်	မှတ်ချက် Leave
အားကစားအသစ်တစ်ခုကိုလေ့လာခြင်းသည်ကလေးတစ် ဦး အတွက်ကြီးမားသောယုံကြည်မှုတိုးပွားစေသည်။ သို့သော်သင်၏အားကစားအသစ်ကိုမည်သို့ကစားရမည်၊ သို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှုအသစ်ကိုမည်သို့ကျွမ်းကျင်ရမည်ကိုသင့်ကလေးအားသင်ကြားပေးခြင်းသည်စိန်ခေါ်ချက်ဖြစ်နိုင်သည်။ သင်နှင့်သင့်ကလေးအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်အားအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့်လက်တွေ့ကျသောအကြံဥာဏ်များရှိပါသည်။
ကလေးတစ် ဦး အားလှုပ်ရှားမှုအသစ်တစ်ခုကိုသင်ကြားရာတွင်အရေးကြီးဆုံးသောအရာမှာသူသည်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစည်းမျဉ်းများကိုသိရန်ဖြစ်သည်။ အားကစားတိုင်းတွင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများပါ ၀ င်ပြီး၊ မတော်တဆမှုများကိုရှောင်ရှားရန်အမြဲတမ်းမဖြစ်နိုင်သော်လည်းလုံခြုံစိတ်ချရသောစည်းမျဉ်းများကိုအစမှသိရှိခြင်းဖြင့်သင့်ကလေးအားဒဏ်ရာများကိုရှောင်ရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအခွင့်အရေးပေးလိမ့်မည်။
Curved Bath Panel ၏အားသာချက်များ
မေလ 27, 2021 မေလ 26, 2021 Olivia အိုလီဗာ	မှတ်ချက် Leave
ကွေးကောက်သော panel panel ကသင်၏နူးညံ့သောရေချိုးခန်းကိုဇိမ်ကျသောနေရာတစ်ခုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပြီးသင်၏ရေချိုးခြင်းအတွေ့အကြုံကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးလိမ့်မည်။ သင်သည်သင်၏ရေချိုးခန်းခန်းကိုအဆင့်မြှင့်ရန်သို့မဟုတ်စတိုင်နှင့်အတူပြန်လည်ရှင်သန်ရန်၊ အနားယူရန်နှင့်ရေပန်းရန်အတွက်ငြိမ်းချမ်းသောဆုတ်ခွာရန်အိပ်မက်မက်ရန်စဉ်းစားနေပါကကွေးသောပုံစံရေချိုးကန်ဘောင်ကိုတပ်ဆင်ရန်စဉ်းစားပါ။ ၎င်းကိုရေချိုးကန်ထဲသို့ထည့်ခြင်းသည်သင်၏ရေချိုးကန်ကိုခေတ်မီစေရန်နှင့်ရေချိုးကန်အောက်ရှိအရာများကိုဖုံးကွယ်ထားရန်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းဖြစ်သည်။ အောက်ပါအားသာချက်ခြောက်ခုကိုဖတ်ခြင်းဖြင့်သင်၏ရေချိုးကန်ကိုအသစ်စက်စက်ဖြစ်စေပါ။
သင်၏ကျန်းမာရေးကိုမိခင်တစ် ဦး အဖြစ်ထားရန်အကောင်းဆုံးနည်းများ
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မေလ 22, 2021 မေလ 21, 2021 Samantha Higgins	မှတ်ချက် Leave
မိခင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ကလေးငယ်တွေကိုဘယ်လိုရှင်သန်အောင်ဘယ်လိုကူညီရမယ်ဆိုတာသိရတာဟာဂုဏ်ယူစရာပါ။ ဒါဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လမ်းအတွက်စူပါပါဝါပါပဲ။ သို့သော်မိခင်တ ဦး အနေဖြင့်သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုနောက်ကွယ်တွင်ထည့်ရန်လွယ်ကူသည်။ ယင်းသို့ဖြစ်ပျက်ခြင်း (သို့မဟုတ်ဆက်လက်) မှကာကွယ်ရန်အောက်ပါအကြံပြုချက်များကိုသုံးသပ်ပါ။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မေလ 20, 2021 မေလ 21, 2021 Sierra Powell	မှတ်ချက် Leave
ကလေးအများစုသည်အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း၌ကြီးပြင်းလာသည်နှင့်အမျှအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကိုတောင်းဆိုကြသည်။ အရ Forbes မဂ္ဂဇင်းသင်၏မိသားစုထဲသို့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ထည့်ခြင်းသည်သင်၏ကလေးများနှင့်သင့်အားမိဘများအနေဖြင့်ကောင်းကျိုးများကိုစစ်ဆေးပေးသည်။ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များသည်သင်၏မိသားစုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ကာယပိုင်းကောင်းမွန်မှုအတွက်ကောင်းမွန်သည်။ ထို့အပြင်မိသားစုအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များကိုဂရုစိုက်ခြင်းကသင်၏ကလေးများအားတာ ၀ န်၊ ယုံကြည်မှု၊ ချစ်ခြင်းနှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပညာပေးသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ၊ မိသားစုတိုင်း၏အခြေအနေသည်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်အတွက်မသင့်လျော်ပါ။ သင်သည်သင်၏ကလေးများကိုအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်မွေးစေလိုသော်လည်းသင်၏မိသားစုထဲသို့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မထည့်သွင်းမီအချို့သောရှုထောင့်များကိုစဉ်းစားရမည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မေလ 16, 2021 မေလ 14, 2021 ဒေးဗစ်ဂျက်ဆင်၊ MBA	မှတ်ချက် Leave
နောက်တွဲယာဉ်အိမ်တစ်လုံးသည်ခရီးသွားခြင်းကိုနှစ်သက်ပြီးကုန်ကျစရိတ်များကိုလျှော့ချလိုသူများအတွက်အလွန်ကောင်းသောအယူအဆဖြစ်သည်။ နောက်တွဲယာဉ်အိမ်တစ်ခုသည်သင်အမြဲတမ်းထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီးလိုအပ်သည့်အခါမွမ်းမံခြင်းနှင့်အဆင့်မြှင့်ခြင်းများနှင့်မိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက်သင်တန်းကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ရေရှည်အိမ်သို့မဟုတ်သေးငယ်သောခရီးများအတွက်သာအသုံးပြုနိုင်သည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေအာကာသပြုလုပ်ခြင်းသည်၎င်းကိုအမှန်တကယ်ဖြစ်စေရန်အတွက်အရေးကြီးသောအရာဖြစ်သည်။ အာကာသပြုလုပ်ခြင်းသည်သင့်တွင်ရှိသည့်သေးငယ်သောနေရာတွင်ပျော်မွေ့ရန်၊ အလုပ်လုပ်ရန်နှင့်ပိုမိုလွယ်ကူသောခရီးကိုခွင့်ပြုရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဒီရှာပုံတော်မှာသင့်ကိုကူညီမယ့်အကြံဥာဏ်အချို့ကိုကြည့်ကြရအောင်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မေလ 7, 2021 မေလ 5, 2021 အဲလက်စ်ဘီလီ	မှတ်ချက် Leave
ငါတို့အများစုသည်မကြာသေးမီကအိမ်၌အချိန်ပိုကုန်ကြသည်။ သင်သည်အိမ်မှအလုပ်လုပ်သည်ဖြစ်စေ၊ မိသားစုတစ်စုကိုပြုစုစောင့်ရှောက်သည်ဖြစ်စေ၊ ကြာမြင့်စွာနေပြီးဖြစ်စေပြန်သည်ဖြစ်စေအိမ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အချိန်အများစုကိုသုံးဖြုန်းနေသည့်နေရာဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်နေရာလွတ်သည်လုံခြုံမှုရှိစေရန်နှင့်ဖိတ်ကြားရန်အရေးကြီးသည်။ လူအများစုကသူတို့အိမ်ကိုပြောင်းချင်တာဒါမှမဟုတ်သူတို့နေရာကိုလန်းဆန်းစေချင်တာ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လွယ်ကူသောအဆင့်မြှင့်တင်မှုငါးခုလာသည့်နေရာဖြစ်သည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မေလ 7, 2021 မေလ 5, 2021 Stephanie Snyder	မှတ်ချက် Leave
သင်၏ဥယျာဉ်၌ပုံမှန်စိုက်ပျိုးခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိသည်။ ၎င်းသည်သင်၏နှလုံးကိုအားဖြည့်ပေးပြီးစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်မှုကိုလျှော့ချပေးသည်။ စိုက်ပျိုးခြင်းသည်သင်၏ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတိုးတက်စေပြီးသင်၏ဥယျာဉ်ကိုစွဲမှတ်စေသည်။ သစ်ပင်များသည်လှပပြီးပန်းများနှင့်အရွက်များလည်းတူသည်။ သင်လည်းသုံးနိုင်သည် မြက်ခင်းများအတွက်အတုမြက် မူရင်းမြက်၏အထင်အမြင်ပေးရန်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မေလ 6, 2021 မေလ 4, 2021 Sierra Powell	မှတ်ချက် Leave
နွေရာသီသည်မိသားစုနှင့်ပျော်စရာကောင်းသောပျော်ရွှင်စရာနှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ပါ၏။ အချို့သောအပန်းဖြေလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းကသင်နှင့်သင်၏မိသားစုအားစွန့်စားမှုအသစ်တစ်ခုကိုပေးနိုင်သည်။ ဒီပျော်ရွှင်စရာမိသားစုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဒီနွေရာသီမှာကြိုးစားကြည့်ခြင်းအားဖြင့်၊ ရာသီဥတုအကောင်းဆုံးကိုခံစားရင်းသင်ချစ်မြတ်နိုးရသူများနှင့်အတူအချိန်ဖြုန်းဖို့ဖန်တီးမှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောနည်းလမ်းများသင်၌ရှိလိမ့်မည်။
Lockdown ပိတ်ချိန်တွင်လုပ်ရမည့်အရာ ၁၀ ခု
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မေလ 2, 2021 မေလ 2, 2021 အဲလက်စ်ဘီလီ	မှတ်ချက် Leave
COVID-19 ကူးစက်ရောဂါကြောင့်အမျိုးသားရေးပိတ်ဆို့မှုများကြောင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိလူအများအပြားတို့သည်သူတို့၏နေအိမ်များကိုပိတ်ဆို့ထားခြင်းခံရသည်။ ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်ချက်တွေပပျောက်သွားတာနဲ့အမျှများစွာသောသူတို့အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတည်ဆောက်လာပါပြီ။
lockdown အဆုံးသတ်တဲ့အခါဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်နေရာမှာစတာလဲ။ သင်လွဲချော်နေသည့်အရာများ၊ ပြန်လည်ရရှိရန်ဆန္ဒပြင်းပြခြင်း၊ ဆက်လုပ်ရန်စောင့်ဆိုင်း။ မရနိုင်သောအရာများရှိနိုင်သည်။ သို့သော်သင်၏အချိန်နှင့်ခွန်အားကိုအများဆုံးအသုံးချရန်အရေးကြီးသည်။
ကောင်းမွန်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသော Sterling လက်ဝတ်ရတနာဝက်ဘ်ဆိုက်အချို့ကားအဘယ်နည်း။
ဧပြီလ 26, 2021 ဧပြီလ 26, 2021 Sylvia ဂျိမ်းစ်	မှတ်ချက် Leave
Sterling silver သည် ၉၂.၅% ငွေအလေးချိန်နှင့်အခြားသတ္တု ၇.၅% ပါဝင်သောငွေသတ္တုစပ်ဖြစ်သည်။ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ၊ ဘာသာရေးအဆင်တန်ဆာများနှင့်လက်ဝတ်ရတနာများစသည်တို့ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ Sterling လက်ဝတ်ရတနာများသည်အထူးသဖြင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးအမျိုးသမီးများအကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဧပြီလ 24, 2021 ဧပြီလ 23, 2021 Lizzie Howard	မှတ်ချက် Leave
သင်ဟာပရော်ဖက်ရှင်နယ်အမျိုးသားတစ်ယောက်ဆိုရင်၊ သင်စဉ်းစားနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးဗီရိုဖြင့်အကောင်းဆုံးကြည့်ချင်သည်။ မင်းရဲ့အကောင်းဆုံးပုံကိုအမြဲတမ်းသိနိုင်ဖို့သင့်ဗီရိုထဲသို့ထည့်ရန်လိုအပ်သောအချက်အချို့ရှိပါသည်။ သင်သည်သင်၏စုဆောင်းမှုကိုစတင်နိုင်အောင်ဒီအခြေခံလိုအပ်ချက်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်အောက်တွင်ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဧပြီလ 21, 2021 ဧပြီလ 20, 2021 ရှင်ပေါလု Wegman	မှတ်ချက် Leave
အပင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ တွင်သာမကကျွန်ုပ်တို့၏ချစ်စနိုးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၏အသက်တာတွင်အလွန်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။ သူတို့သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးကိုပိုမိုဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်ပြီးလေထုညစ်ညမ်းမှုကိုလျှော့ချရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လူနေမှုအဆင့်အတန်းကိုမြှင့်တင်ရန်ကူညီသည်။ ထို့အပြင်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မိဘများသည်သင့်အိမ်၌အိမ်အပင်များရှိရမည်။ ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းတာကအိမ်တိုင်းစက်ရုံတိုင်းကလုံခြုံတာမဟုတ်ဘူး။ အချို့ရှိပါသည် အဆိပ်သင့်ခြင်းနှင့်သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအတွက်အလွန်အန္တရာယ်ရှိသော။ သူတို့ကဘယ်သူတွေလဲ ကောင်းပြီ၊ သူတို့ထဲက ၁၀ ယောက်ကိုငါတို့ကြည့်မယ်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဧပြီလ 18, 2021 ဧပြီလ 15, 2021 Sierra Powell	မှတ်ချက် Leave
ကလေးများကဲ့သို့အရွယ်ရောက်ပြီးသူများလည်းစိတ်အေးအေးထားရန်၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုထုတ်လွှင့်ရန်သို့မဟုတ်သူတို့၏တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုပြရန်ပျော်စရာကောင်းဖို့လိုသည်။ ဤရွေ့ကားစာအုပ်များ coloring အရွယ်ရောက်ယနေ့ခေတ်အတော်လေးဘုံဖြစ်လာကြပြီအကြောင်းပြချက်အချို့ကိုဖြစ်ကြသည်။ ထို့အပြင်အရွယ်ရောက်သူများမှလက်မှုပညာများသည်ဗီရို၊ လက်ဆောင်များ၊ အိမ်အလှဆင်စသည့်များစွာသောအိမ်လုပ်ပစ္စည်းများရရှိနိုင်သည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဧပြီလ 15, 2021 ဧပြီလ 13, 2021 Sylvia ဂျိမ်းစ်	မှတ်ချက် Leave
Stevia ကိုသုညကယ်လိုရီအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ၎င်းတွင်တိတိကျကျမရှိသည့်ကယ်လိုရီများမပါရှိသော်လည်း၎င်းသည်သကြားဓာတ်ထက်သိသိသာသာနည်းပြီးသုညကယ်လိုရီအဖြစ်သတ်မှတ်ရန်လုံလောက်သည်။
Stevia ရှိအချိုဓာတ်များသည်သဘာဝကျကျဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤလက္ခဏာသည်သဘာဝရင်းမြစ်များဖြစ်သောအစားအစာများနှင့်အဖျော်ယမကာများကိုပိုမိုနှစ်သက်သောသူများအတွက်အကျိုးရှိသည် Nexba သကြားဓာတ်အခမဲ့အချိုရည်။ Stevia ၏ကယ်လိုရီနိမ့်အရည်အသွေးသည်ဆီးချိုရောဂါရှိသူများနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျရန်ရည်ရွယ်သူများအတွက်ကျန်းမာရေးအတွက်အစားထိုးသည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဧပြီလ 14, 2021 ဧပြီလ 12, 2021 Tracie ဂျွန်ဆင်	မှတ်ချက် Leave
နွေရာသီရောက်လာပြီ၊ အထူးသဖြင့်အိမ်ပြင်တွင်ပျော်မွေ့ရန်ကြိုးစားသောအခါအထူးသဖြင့်လွတ်မြောက်ရန်ခဲယဉ်းသည့်အပူကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ နေရောင်၌သင်၏အချိန်ကိုကန့်သတ်ထားခြင်း၊ ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းခြင်းနှင့်နေရောင်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ပါကနေရောင်ကာကွယ်ဆေးကိုပုံမှန်အသုံးပြုရန်အရေးကြီးသည်။ သင်ကိုယ်တိုင်သာမကကလေးများအတွက်ဤလိုအပ်ချက်များကိုသတိပြုပါ။ ဤကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ထားခြင်းဖြင့်အခြားနွေရာသီအပူကိုအနိုင်ယူရန်သင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်သည့်အခြားရိုးရှင်းသောနှင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်နည်းလမ်းများရှိသည်။
ဧပြီလ 13, 2021 ဧပြီလ 12, 2021 မာရီနီ	မှတ်ချက် Leave
သင်၏အိမ်ကိုထူးခြားပြီးသင့်ကိုအမှန်တကယ်ပိုင်ဆိုင်စေသောအထူးထိတွေ့မှုတစ်ခုကားအဘယ်နည်း။ ကောင်းပြီ၊ သင်၊ သင်ချစ်ရသူများနှင့်သူငယ်ချင်းများစွာ၏ဓာတ်ပုံများစွာရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။ သို့သော်သင်၏အမွေးအဖော်များကော။ သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့်အတူဓာတ်ပုံကောင်းကောင်းမရှိကြောင်းသင်ယခုသဘောပေါက်ပြီဆိုပါက၎င်းတို့ကိုတကယ့်ထူးခြားသောလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပုံတူကိုအံ့အားသင့်စေမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။
စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပျော်ရွှင်မှု - ၂၀၂၁ အတွက်ဇိမ်ခံခရီးသွားခြင်းဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များ
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မတ်လ 27, 2021 မတ်လ 26, 2021 Sheryl Wright	မှတ်ချက် Leave
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကမ္ဘာကြီးရပ်တန့်သွားခြင်းနှင့်အတူလူများစွာသည်ထိုနေရာသို့ပြန်လာပြီးခရီးသွားလာကြရန်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြသည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်အားလပ်ရက်များသို့မဟုတ်စီးပွားရေးခရီးစဉ်များစွာကိုဖျက်သိမ်းလိုက်သောကြောင့်ခရီးသွားအချို့သည်သူတို့၏အိတ်ကပ်ထဲ၌အပေါက်တစ်ပေါက်ကိုမီးရှို့နေသည်။ ကျွမ်းကျင်သောခရီးသွားများသည်ဤငွေကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏စီးပွားရေးအတွေ့အကြုံများကိုကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်အသုံးချနိုင်ရန်သူတို့၏ခရီးသွားအတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်ရန်စဉ်းစားကြလိမ့်မည်။ ဇိမ်ခံခရီးသွားအတွေ့အကြုံများသည်ယခင်ကထက်ပိုမိုလက်လှမ်းမီပြီးစျေးနှုန်းသက်သာပြီးလူတိုင်းသည်သူတို့၏နောက်အားလပ်ရက်များအတွက်သူတို့၏အတွေ့အကြုံများကိုမြှင့်တင်ရန်ထိုက်တန်သည်။ သင်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပျော်စရာအတွက်ခရီးသွားနေသည်ဖြစ်စေမည်သို့ပင် ၂၀၂၁ အတွက်အကောင်းဆုံးဇိမ်ခံကားခရီးသွားအကြံဉာဏ်ငါးခုကိုဤနေရာတွင်ကြည့်ပါ။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မတ်လ 24, 2021 မတ်လ 24, 2021 Tracie ဂျွန်ဆင်	မှတ်ချက် Leave
များစွာရှိပါသည် အာကာသအလုပ်အကိုင်များ အာကာသပရိုဂရမ်နှင့်အတူနိုင်ငံရေးတွင်အလုပ်လုပ်သူတစ် ဦး ချင်းစီမှအာကာသယာဉ်မှူးအထိရရှိနိုင်ပါ။ ဤအရာတစ်ခုချင်းစီသည်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ သင်ရရှိနိုင်သောမည်သည့်အရာကိုမဆိုအလွန်စိတ် ၀ င်စားသည်။ သင်နှင့်သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောနည်းလမ်းသုံးခုကိုရှာဖွေ။ သင်၏အိပ်မက်ကိုအသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းအဖြစ်ရှာဖွေပါ။
မတ်လ 23, 2021 မတ်လ 22, 2021 သီရိ	မှတ်ချက် Leave
သင့်အနေဖြင့်ဂီတထုတ်လုပ်မှုကိုစိတ်အားထက်သန်လျှင်သင်၏အရေးကြီးသောကဏ္ aspects အားလုံးတွင်အရည်အချင်းရှိရန်လိုအပ်သည်။ သင်နည်းစနစ်များကိုလေ့လာခြင်းမပြုလျှင်ဂီတကိုရောစပ်ခြင်းသည်အထူးသဖြင့်ရှုပ်ထွေးနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်သည်မှားယွင်းသောအမှားအယွင်းအချို့ကိုတေးဂီတရောစပ်ခြင်းတွင်တရားဝင်ပညာရေးမပါရှိဘဲသင်အားလေ့လာသူအဖြစ်ချက်ချင်းမှတ်သားလိမ့်မည်။ တေးဂီတထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မသိသောအသံအင်ဂျင်နီယာများအမှားအယွင်းများသည် -
မတ်လ 23, 2021 မတ်လ 22, 2021 David Wexelman	မှတ်ချက် Leave
နွေ ဦး ရာသီ၏အစတွင်နှစ်စဉ်ပသခါပွဲကိုကျင်းပကြသည်။ ဂျူးလူမျိုးများ၏အီဂျစ်ပြည်မှဖာရိုဘုရင်ထံကျွန်ခံရာမှထွက်မြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုဓမ္မဟောင်းကျမ်းဟုခေါ်သောမောရှေ၏စာအုပ်ငါးအုပ်တွင်ရေးသားခဲ့သည်။ သမ္မာကျမ်းစာသည်ခြောက်ရက်အတွင်းတန်ခိုးကြီးသောဘုရားသခင်ကကမ္ဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းနှင့်စတင်ခဲ့ပြီးသတ္တမနေ့၌ဘုရားသခင်သည်သူ၏အလုပ်မှအနားယူခဲ့သည်။
မတ်လ 22, 2021 မတ်လ 19, 2021 အဲလက်စ်ဘီလီ	မှတ်ချက် Leave
ကော်ဇောများသည်ယူကေတွင်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်အကျယ်ပြန့်ဆုံးအခင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ကအခန်းတစ်ခန်းကိုနှစ်သိမ့်မှုပေးပြီးနွေးထွေးမှုကိုကာကွယ်ပေးတယ်၊ ပြီးတော့ဇိမ်ခံမှုကိုတောင်ခံစားရတယ်ဟုဆိုသည်။
သင်၏ကော်ဇောသည်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းသင်သိလျှင်ကော ဒီဘုံအိမ်တွင်းအင်္ဂါရပ်ကိုစောင့်ကြည့်ပြီးသင်နှင့်သင့်အိမ်သည်အန္တရာယ်များစွာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလျှင်ကော။ စိတ်ပူစရာမလိုပါ၊ ဤဆောင်းပါး၌သင့်အားဖြေရှင်းနည်းများကိုပြသမည်။
ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် - က Man နှင့် Ape
မတ်လ 17, 2021 မတ်လ 16, 2021 David Wexelman	မှတ်ချက် Leave
သမ္မာကျမ်းစာကလူသားများကိုသူတို့၏ဘဝတွင်သူတို့မဟုတ်ကြောင်းသက်သေပြရန်အားပေးသည် homo sapiens သည် Ape မှပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ဘာသာတရားသည်ဤလောကသို့ ၀ င်ရောက်လာသည်။ Man နှင့် Ape အကြားအလွန်တူညီသည်။ နှစ် ဦး စလုံးတူညီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရပ်ရှိသည်။ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးမှာဆံပင်ရှိတယ်။ Man the ape ကို Homo sapiens လို့လည်းခေါ်တယ်။ အချို့ကယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့၏အဓိက ၀ ိညာဉ်ရေးရာအလုပ်မှာသူတို့ Ape နှင့်မည်သို့ကွာခြားသည်ကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မတ်လ 16, 2021 မတ်လ 15, 2021 အဲလက်စ်ဘီလီ	မှတ်ချက် Leave
ဤအချိန်သည်ခက်ခဲသောအချိန်များဖြစ်ပြီးလူများစွာသည်ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချရန်နှင့်ငွေစုဆောင်းရန်နည်းလမ်းများရှာဖွေနေကြသည်။ နေ့စဉ်အသက်တာ၌အကုန်အကျအများဆုံးထွက်ခွာခြင်းတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာအလုပ်ခွင်သို့သွားခြင်း၊ မိသားစုသို့အလည်အပတ်သွားခြင်း၊ အပန်းဖြေခရီးထွက်ခြင်း၊
ကံကောင်းတာကသင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှာပိုက်ဆံချွေတာနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုသိသိသာသာလျှော့ချနိုင်တယ်။ ပိုမိုကြိုးစားပြီးစမ်းသပ်ပြီးသောအကြံပြုချက်များတွင်ခရီးသွားခြင်း၊ ကားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်အထူးလျှော့စျေးများရှာဖွေခြင်း၊ လောင်စာဆီစျေးနှုန်းပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ၀ ယ်ခြင်းစသည်တို့ပါဝင်သည်။
၀ င်းဒိုးကိုအခန်းတစ်ခန်း၏ Focal Point လုပ်နည်း
မတ်လ 14, 2021 မတ်လ 13, 2021 မင်းသမီး Emma Williams	မှတ်ချက် Leave
အိမ်ကိုပြန်လည်ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းသည်မလွယ်ကူပါ။ မင်းအဲဒီကော်ဇောကိုအစားထိုးပါသလား ဒီတစ်ခါလည်းမင်းဆေးသုတ်အသစ်လိုချင်နေတယ်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပရိဘောဂတစ်ခု update ကိုအသုံးပြုနိုင်တယ်။ အမှန်မှာ၊ အကြီးမားဆုံးသောပြissuesနာတစ်ခုမှာမည်သည့်နေရာတွင်စတင်မည်ကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ သင့်ကိုပြတင်းပေါက်ကနေစခိုင်းတာပါ။ စနစ်တကျတပ်ဆင်ထားသော ၀ င်းဒိုးသည်အခန်းတစ်ခန်း၏ပုံနှင့်ခံစားပုံကိုလုံး ၀ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ သင့်အိမ်သို့ ၀ င်ရောက်လာသောသဘာဝအလင်းရောင်အားလုံးသည်ကွဲပြားခြားနားသောကမ္ဘာကိုဆိုလိုနိုင်သည်။ သူတို့ကိုသင်၏အခန်း၏အဓိကနေရာတစ်ခုအဖြစ်ထားခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်သင်၏ဘဝကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရန်နည်းလမ်း ၅ ချက်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မတ်လ 13, 2021 မတ်လ 12, 2021 Sierra Powell	မှတ်ချက် Leave
လူတို့သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ရှေ့သို့ဆက်လက်ရွေ့လျားနေပြီးဘဝသည်ပုံမှန်အဆင့်သို့ပြန်ရောက်သွားသည်နှင့်အမျှ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်ကျော်လွန်သွားသောစိန်ခေါ်မှုများမှပြန်လည်ထူထောင်ရန်နည်းလမ်းများရှာဖွေရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ သီးခြားအချိန်ဖြုန်းပြီးစိတ်ဖိစီးမှုများသောကာလတွင် ၂၀၂၁ သည်လူတို့၏ဘ ၀ ကိုတိုးတက်စေသည့်တစ်နှစ်ဖြစ်နိုင်သည်။ မည်သူမဆိုသူတို့၏ဘ ၀ ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်ကူညီနိုင်သည့်လှည့်ကွက်များနှင့်အကြံပြုချက်များငါးခုရှိသည်။
၆ ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်သည့်နည်းလမ်းများနှင့်မည်သို့ရပ်တန့်ရမည်နည်း။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မတ်လ 11, 2021 မတ်လ 10, 2021 အဲလက်စ်ဘီလီ	မှတ်ချက် Leave
သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုထိခိုက်စေသူများစွာသည်၎င်းတို့ပြုလုပ်နေသည်ကိုပင်မသိကြောင်းသင်သိပါသလား။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုကိုကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းများ၊ ထိခိုက်နစ်နာစေသည့်ထုတ်လွှတ်မှုများသို့မဟုတ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာညစ်ညမ်းမှုများကြောင့်အကြီးအကျယ်ပျက်စီးစေခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်များသို့မဟုတ်အလုပ်ခွင်များတွင်သေးငယ်သော်လည်းသိသာထင်ရှားသည့်နည်းများဖြင့်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
သို့သော်သိ သငျသညျပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေခြင်းငှါ, သိမ်မွေ့နည်းလမ်းတွေ နေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာ, သင်အစားကကူညီရန်အပြောင်းအလဲများကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အသေးအမွှားလေးများနှင့်သတိရသည့်ချိန်ညှိမှုများဖြင့်သင်၏နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်၊ အိမ်နှင့်အလုပ်နေရာများကိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်စေသောနည်းလမ်းများဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
အရှည်ဆုံး Range နှင့်အတူလျှပ်စစ်ကားများ 5
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မတ်လ 8, 2021 မတ်လ 8, 2021 အဲလက်စ်ဘီလီ	မှတ်ချက် Leave
ထုတ်လွှတ်မှုလုံးဝမရှိသောကားတစ်စီးကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါအစိုးရ၏ထောက်ပံ့ငွေသည်ပေါင် ၃၅၀၀ ၀ ယ်ယူထားသည့်ဈေးနှုန်းနှင့်အခွန်လွတ်ဖြစ်သည်။ အိုး၊ လိုအပ်တယ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလျော့နည်း, အနိမ့်ပြေးကုန်ကျစရိတ်ရှိပြီး, နီးပါးမျှဆူညံသံဖန်တီးပေးပါတယ်။
ဒီကားဟာစိတ်ကူးယဉ်သက်သက်မျှမဟုတ်ဘဲ၊ လျှပ်စစ်ကား (EV) ။ ဒါပေမယ့် ဤအရာအလုံးစုံအကျိုးခံစားခွင့်ရှိနေသော်လည်းလျှပ်စစ်ကားများသည်ဗြိတိန်နှစ်ပတ်လည်ကားရောင်းအား၏ ၁-၂% သာပါဝင်သည်။ ထို့ကြောင့်အဘယ်ကြောင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိယာဉ်မောင်းများ EVs များကိုဝယ်ယူကြသနည်း။
ခေတ်သစ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု - ပြောင်းလဲနေတဲ့ကမ္ဘာကြီး
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မတ်လ 7, 2021 မတ်လ 7, 2021 David Wexelman	မှတ်ချက် Leave
ဖန်ဆင်းခြင်း၏ပထမနေ့တွင်ဘုရားသခင်ကအလင်းရှိပါစေသော။ New Age ကိုစတင်ရန်အလင်းရှိခဲ့သည်။ New Age လှုပ်ရှားမှုသည်ကမ္ဘာ့စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဘာသာတရားများနှင့်လူမျိုးများကိုစုစည်းရန်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ခေတ်သစ်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာစစ်ကိုကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ တတိယမြောက်နျူကလီးယားစစ်ပွဲ၏ခြိမ်းခြောက်မှုအောက်တွင်နေထိုင်လျက် New Age ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Francis ကအိုမင်းခြင်းနဲ့ခေတ်သစ်ကြားငြိမ်းချမ်းရေးကိုစေ့စပ်ညှိနှိုင်းနေပါတယ်။ ဒီနေ့သူအီရတ်ကိုသွားနေတယ်.
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မတ်လ 3, 2021 မတ်လ 2, 2021 David Wexelman	မှတ်ချက် Leave
Woodstock မှာပွဲတော်တစ်ခုရှိတုန်းက Guru Janardan ကအမေရိကကိုခရီးထွက်ခဲ့တယ်။ Woodstock ပွဲကျင်းပချိန် ၁၉၆၉ ခုနှစ်တွင်သူသည်ချီကာဂိုတွင် Ajapa Yoga ကိုလေ့လာရန်လူများကိုလက်ခံခဲ့သည်။ ချီကာဂိုသို့သူ၏ခရီးစဉ်၏အထွတ်အထိပ်သည်ဘာသာတရားအားလုံးမှလူများအားစုဝေးစေခြင်းဖြစ်သည်။ ဤကွန်ဗင်းရှင်းတွင် Guru Janardan ကလူအများစည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုညီအစ်ကိုများအနေနှင့်ညီညွတ်ခြင်းအားဖြင့်ဤနည်းဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည့်ဖန်တီးမှုစွမ်းအားနှင့်အတူတကွပေါင်းစည်းရန်အားပေးခဲ့သည်။ ယောဂတရားအားထုတ်ခြင်းနှင့်အသက်ရှုခြင်းတည်းဖြတ်ခြင်းကိုသွန်သင်သည်။ ယောဂသည်စာသားအရစည်းလုံးမှုကိုဆိုလိုသည်။ Guru Janardan သည်အသက်ရှူခြင်း၏ဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းကြောင်းနှစ်ခုဖြစ်သောအာရုံကိုဆွဲဆောင်ခြင်း၊ သူက, ဆွဲဆောင်မှုက - တစျခုရွံ။ ဘဝ၏ရည်မှန်းချက်မှာဤဆန့်ကျင်ဘက်နှစ်ခုအားသူတို့ဖြစ်ပေါ်လာသောဖန်ဆင်းရာအားလုံး၏အတွင်းပိုင်းရင်းမြစ်နှင့်ပေါင်းစည်းရန်ဖြစ်သည်။ ဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့်တွန်းလှန်ခြင်းစွမ်းအင်များသည်ဘ ၀ တွင်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ Kabballa esoteric Judaism သည်ဤကမ္ဘာစွမ်းအားကိုရည်ညွှန်း။ ဤစွမ်းအင်နှစ်ခုကိုဖော်ပြသည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မတ်လ 2, 2021 မတ်လ 1, 2021 Miguel Torneire	မှတ်ချက် Leave
ချာ့ချ်သည်ဖွံ့ဖြိုးဆဲအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့်ဆင်းရဲနွမ်းပါးသောဒေသများ၏တိုးတက်မှုများအတွက်ရှေ့တန်းမှဆောင်ရွက်သည်။ ချာ့ချ်များအတွက်“ ရော်ဘင်ဟဒ်” ခေါင်းစဉ်ကိုဆင်းရဲသားများအားနှစ်သိမ့်အားပေးမှုနှင့်စောင့်ရှောက်မှုအမွေပေးခဲ့သည်။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောချဉ်းကပ်မှုများသည်တသမတ်တည်းထိရောက်သောရလဒ်များကိုတစ်ခါမျှမပေးခဲ့ပါ။ အသေးစိတ်ဖော်ပြရန်အတွက်ဤချဉ်းကပ်မှုများသည်တူညီသောဖြန့်ဝေခြင်းထက်ကြွယ်ဝသောစည်းစိမ်ကိုပိုမိုစီးဆင်းစေသည်။ ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းများနှင့်ရည်ရွယ်ထားသောအစီအမံများရှိသော်လည်းချာ့ချ်၏ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကိုငွေကြေးအချိုးအစားဖြင့်လျှော့ချရန်ကြိုးပမ်းမှုများသည်များသောအားဖြင့်ချက်ချင်းအကျိုးကျေးဇူးများရရှိစေသည်။ ရေတိုဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၏အခြေအနေကိုတိုးတက်စေရန်ကြိုးပမ်းမှုကြောင့်ချာ့ချ်အပေါ်တွင်မူငွေရေးကြေးရေးအရမှီခိုနေရသည်။
မတ်လ 1, 2021 မတ်လ 1, 2021 David Wexelman	မှတ်ချက် Leave
၁၅ နှစ်ကျော်အသနားခံလွှာတင်ပြီးရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ ၃ ပတ်အလိုတွင်အစ္စရေးတရားရုံးချုပ်ကအစ္စရေးနိုင်ငံတွင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့်ရှေးရိုးစွဲအပြောင်းအလဲများဖြင့်ဂျူးဘာသာသို့ကူးပြောင်းလာသူများကိုနိုင်ငံတော်ကဂျူးလူမျိုးအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည်ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ တရားရုံးမှလည်းပြောင်းလဲသူများကိုအစ္စရေးနိုင်ငံသားအပြည့်အ ၀ ပြန်လည်နေထိုင်ခွင့်ဥပဒေအရခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
မတ်လ 1, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 28, 2021 David Wexelman	မှတ်ချက် Leave
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မတ်လ 1, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 27, 2021 Dmytro Spilka	မှတ်ချက် Leave
အားသွင်းနိုင်သည့်စွမ်းအင်ရှိသောဘက်ထရီများ လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်များ ငါးမိနစ်အတွင်းပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အဘို့အစက်ရုံအတွက်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြပြီ။ ဒီနည်းပညာတိုးတက်မှုကအစုလိုက်အပြုံလိုက် EV မွေးစားခြင်းအတွက်လမ်းခင်းပေးနိုင်မလား။
လျှပ်စစ်ယာဉ်များသည်ရာသီဥတုအကျပ်အတည်းကိုဖြေရှင်းရန်လှုပ်ရှားမှု၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်မွေးစားရန်အကြီးမားဆုံးအခက်အခဲတစ်ခုမှာဘက်ထရီသက်တမ်းနှင့်ဘက်ထရီကိုအားပြန်သွင်းရန်အချိန်မသေချာမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့် lithium-ion ဘက်ထရီများကိုအစ္စရေးကုမ္ပဏီ StoreDot မှထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး၊ စံထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ.
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 28, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 27, 2021 Sylvia ဂျိမ်းစ်	မှတ်ချက် Leave
အပင်အခြေပြုပရိုတိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ အများလက်ခံဆုံးအယူအဆတစ်ခုမှာ၎င်းတို့သည်အသားအခြေခံများကဲ့သို့ပရိုတင်းများကိုထိရောက်စွာမထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်သူများအကြားသက်သတ်လွတ်အစားအစာများကိုအလွန်နားလည်မှုလွဲပြီးသက်သတ်လွတ်စားသောအစားအစာဟုဆိုသူများသည်အားကစားရုံမှအမြဲတမ်းရယ်မောလေ့ရှိသည်။
အဆိုပါကဲ့သို့ပင် Nuzest သန့်ရှင်းပိန်ပရိုတိန်း, အပင် -based ပရိုတိန်းအများအပြားတိရိစ္ဆာန်ပရိုတိန်းကဲ့သို့ထိရောက်သောဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်နှင့်လူများအတွက်ခေတ်သစ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနကိုကျေးဇူးတင်နိုင်ပါတယ်။
12... 22 ပို့စ်အဟောင်းများ